आखिर के हो त्यो धोनीको पञ्जामा भएको चिन्ह जसले तात्यो सामाजिक सञ्जाल ? || सुनौलो नेपाल
आखिर के हो त्यो धोनीको पञ्जामा भएको चिन्ह जसले तात्यो सामाजिक सञ्जाल ?
जेठ २४ काठमाडौं विश्वका सफल कप्तानमध्येका एक भारतीय टिमका विकेटकिपर ब्याट्सम्यान महेन्द्रसिंह धोनी अहिले अन्तिम विश्वकप खेल्दैछन्। कमै मात्रामा विवादमा आउने खेलाडीको रुपमा रहेका धोनी पछिल्लो पटक भने विश्वकपमा सुरुदेखि नै विवादमा तानिएका छन्।
पाँच तारिखमा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको खेलमा धोनीले लगाएको विकेट किपिङ ग्लोब्सका कारण विवादमा परे। ४०औँ ओभरमा उनले युजवेन्द्र चहलको बलिङमा स्टम्पिङ गरेपछि उनको पञ्जाको चर्चा सुरु भएको हो। सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु भएको बहसमा आहिले आईसीसी र बीसीसीआईका साथै भारतका खेलकूद मन्त्री र पाकिस्तानसमेत जोडिन आइपुगेका छन्।
विश्वकपअन्तर्गत दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको खेलमा धोनीले भारतीय सेनाको बलिदान अंकित पञ्जा लगाएका थिए। त्याे लोगो भारतीय सेनाकाे पारा स्पेसल फोर्सको हो। उनको पञ्जामा रहेको त्याे चित्र फेलुकवायोलाई स्टम्पिङ गर्दाको रिप्लेमा देखिएको थियो। लोगोमा देवनागरी लिपीमा बलिदान लेखिएको छ। यस्तो लाेगो पारामिलिटरी कमान्डोले मात्र लगाउन सक्छन्।
सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस हुन थालेपछि आईसीसीले धोनीलाई पञ्जामा भएको चिन्ह हटाउन भनेको थियो। यस विषयमा धोनीले केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। आईसीसीकाे नियमअनुसार जर्सी तथा खेल सामग्रीहरुमा कुनै प्रकारको राजनीतिक धार्मिक वा जातीय सन्देश दिने खालका चिन्हहरु राख्न पाइँदैन।